Shirka Golaha Guud ee SOMA oo magaalada Muqdisho ka furmay - Jowhar somali news leader
Shirka Golaha Guud ee Ururka Warbaahintaa Soomaaliyeed (SOMA) ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya.
Munaasabadii furitaanka Kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay madaxda Ururka SOMA, milkiilayaasha warbaahinta iyo Agaasimayaasha xubnaha ka ah ururkan, marti sharaf kale oo ka socday Xiriirka Suxufiyiinta Soomaaliyeed (FESOJ), Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed (SJS), Shabakadda Warbaahinta Haweenka (WMN), Suxufiyiinta Haweenka Soomaaliyeed (SWJ) iyo Wasaaradda Warfaafinta Dowlada Federalka Soomaaliya.
Kulanka Golaha Guud ee SOMA, oo la qabto saddexdii sanaba hal mar ayaa ujeedadiisu tahay in diiradda lagu saaro mawduucyada muhiimka ah oo ay ku jiraan dib-u-eegistii guulaha hore ee ururka, ka doodista hab-maamuuska badbaadada ee ilaalinta warbaahinta iyo suxufiyiinta, istaraatijiyadda u doodista iyo doorashada maamulka cusub ee ururka.
Furitaankii shirka ayaa waxaa ka hadlay, Guddoomiyaha SOMA Maxamed Cusmaan Makaran ayaa soo dhoweeyay xubnaha ka kooban soddonka laba ka mid ah Warbaahinta SOMA ee ka howlgala Muqdisho iyo dhammaan shanta dowlad goboleed ee Soomaaliya iyo martida la casuumay.
Dhiniciisa, Maxamed Cabdiwahaab, Xoghayaha Guud ee SOMA ayaa tilmaamay in SOMA ay door weyn ka qaadatay wacyigelinta bulshada ee Covid-19 iyadoo gudbisay farriimaha wacyigelinta dhammaan xarumaha warbaahinta ee xubinta ka ah dhammaan gobollada Soomaaliya.
Cabdalle Muumin, Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed (SJS) ayaa ku ammaanay SOMA howlaha ay u qabato bulshada ayna tahay tusaale wanaagsan in ay saddexdii sanaba ay mar doortaan hoggaan cusub.
“SOMA waxa ay calaamad u tahay in ururka warbaahintu si dimoqraadi ah uu u dooranayo madaxdiisa,iyadoo siyaasiyiinta iyo dawladda wakhtigoodu dhammaaday aanay weli si buuxda u qaban doorashooyinkii guud ee la filayay. ”ayuu yiri Cabdalle Muumin.
Abaadir Cabdulqaadir Cilmi, Guddoomiyaha Xiriirka Suxufiyiinta Soomaaliyeed (FESOJ) oo ka hadlay munaasabada furitaanka Shirka Golaha Guud ee SOMA ayaa sheegay in FESOJ iyo SOMA ay iska kaashadeen dadaallada u -doodidda si kor loogu qaado xirfadaha xirfadeed ee shaqaalaha warbaahinta iyo ilaalinta warbaahinta iyo suxufiyiinta.
Sidoo kale waxaa ka hadashay munaasabadam Nafisa Xirsi oo ka tirsan Shabakadda Haweenka Warbaahinta (MWN) ayaa u soo jeedisay maamulayaasha cusub ee soo socda ee SOMA inay xoogga saaraan sidii isbeddel loogu samayn lahaa xaaladda saxafiyiinta gabdhaha ee dhinaca doorka hoggaamineed.
Farxiya Maxamed Khayre, Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Haweenka Soomaaliyeed (SWJ) ayaa sheegtay in kulanka guud e SOMA ay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah iyo hoggaan cusub oo la doorto.
Cabdulqaadir Maxamed, Agaasimaha Xiriirka Saxaafadda ee Wasaaradda Warfaafinta ayaa isaguna u rajeeyay kulanka SOMA uu guul ku dhamaado waxana uu cadeeyay in wasaaradu ay la shaqeyn doonaan maamulka cusub ee ururka.
Shirka Golaha Guud ee SOMA oo saddexdii sanaba mar la qabto ayaa la filayaa inuu sii socdo labada maalmood ee soo socota waxaana diiradda lagu saari doonaa arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin barnaamijka wadaagista nuxurka, istaraatijiyadda u doodista iyo doorashada kooxda maamulka cusub ee ururka saddexda sano ee soo socota.